Savoring the flavors of the Seychelles | Seychelles travel news
Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Seychelles wararka safarka » Ku dhadhamiya dhadhanka Seychelles
Ku dhadhamiya dhadhanka Seychelles
Safar loo aado jasiiradaha Seychelles ayaan dhameystirneyn iyada oo aan laga soo qaadin cunnooyinka maxalliga ah. Waxay la wadaagayaan qaar ka mid ah waxyaabaha ay tahay in la tijaabiyo cunnada Creole ee soo booqdayaashu waa inay ka saaraan liistadooda inta lagu jiro fasaxooda soo socda
Cunnooyinka loo yaqaan 'Creole cuisine' ayaa caan ku ah isku darka dhirta iyo dhir udgoon, taas oo ka tarjumeysa hidaha kala duwan ee bulshada ee saxan kasta.
Cunnooyinka loo yaqaan 'Creole' ayaa inta badan ka kooban dhir udgoon iyo dhadhan sida chili, turmeric, masala, sinjibiil, toon, wax soo saarka muhaajiriinta Hindida iyo Shiinaha.
Kuwa doonaya inay ku qancaan iligooda macaan, jasiiraduhu waxay kaloo bixiyaan suxuun ay ku jiraan tilmaamo jilicsan oo ah vanilj, nutmeg, qorfe iyo citronella.
Biyaha Turquoise, xeebaha cadcad iyo kaymaha roobka ma aha taajirnimada kaliya ee jasiiradaha Seychelles ay bixiyaan. Iyada oo dhaxal ahaan ay u fiican tahay sida ku xeeran, ma aha wax lala yaabo in cunnada laga cunteeyo ee Seychelles Creole ay soo jiito dhadhanka dhadhanka socdaalka ee ka kala imanaya daafaha adduunka.
Ku faanista noocyo kala duwan oo dhadhan ah, oo laga soo qaaday awoowayaashood, cunnada 'Creole' ayaa caan ku ah isku darka dhirta iyo dhir udgoon, taas oo ka tarjumeysa hidaha kala duwan ee bulshada ee saxan kasta.
Cunnooyinka loo yaqaan 'Creole' waxay inta badan ka kooban yihiin dhir udgoon iyo dhadhan sida chili, turmeric, masala, sinjibiil, toon, alaabooyinka soogalootiga Hindida iyo Shiinaha kuwaas oo ku darsaday qallooca suxuunta Faransiiska iyo Ingriiska ee ay soo bandhigeen gumeystayaashu. Kuwa doonaya inay ku qancaan iligooda macaan, jasiiraduhu waxay kaloo bixiyaan suxuun ay ku jiraan tilmaamo jilicsan oo ah vanilj, nutmeg, qorfe iyo citronella.
Markii ay janno sahaminayeen, Seychelles waxay soo jeedinaysaa booqdayaashu inay ku qaataan safafkooda safarka caloosha ee daahfurka iyagoo wata qaar ka mid ah cuntooyinkan la isku halleyn karo.